Golaha Aqalka Sare oo markii ugu horreysay la hor geeyey maanta Hindisaha Sharciga Naafada – Kalfadhi
December 6, 2018 Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ayaa maanta aqrinta 1-aad mariyey Hindisaha Sharciga Dhismaha Hay’adda Naafada Qaranka. Kulanka Golaha ee la hor keenay hindisahaas waxaa joogtay 29 Sanatar, waxaana shir-guddoominayey Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha, Abshir Axmed (Bukhaari), oo markuu kulanka furay u yeeray Wasiirka Haweenka iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka, Marwo Deeqa Xaaji Yuusuf oo ay Wasaaraddeedu curisay hindisahaas, si ay sharciga ugu aqriso Golaha Aqalka Sare.
Wasiiraddu waxay Golaha ka hor sheegtay in la mid ah intii ay ku tiri Golaha Shacabka, markii ay hindisaha sharcigaan hor geyneysay. “Sharcigaan Waa sharcigii 1-aad ee dalka, waxa uuna muhiim u yahay Naafada Soomaaliyeed, si ay u helaan xaquuq” ayey tiri Wasiir Deeqa. Iyadoo la talineysa Aqalka yey Wasiiraddu tiri “Doodda sharcigaan aad hadda haysaan waa in aad si wanaagsan u aqrisaan, waxaana hubaa in aad wax ku dari doontaan”.
Sanatarada ka hadlay hindisahan kama badneyn laba, iyagana mid ka mid ah uun baa su’aal ka keentay in ay Wasaaraddu kasoo talo-gelisay sharcigaan Dowlad Goboleedyada. “(Hindisaha) sharcigaan Wasaaraddu maka soo tala galisay maamulada ka jira dalka mise wax tala ah kuma lahan?” ayey Sanatar Hodan Maxamuud Cusmaan weydiisay Wasiir Deeqa, balse ma helin fursad loogu jawaabo.
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Aqalka Sare, Abshir Axmed (Bukhaari), ayaa u sheegay Golaha in, maadaama uu maanta marinayo aqrinta 1-aad, aysan jirin dood badan oo ka dhici kartay kulanka Golaha ee maanta. Waxa uu ugu baaqay Golaha iney si fiican u soo aqriyaan hindisaha sharciga, si ciddii dood ka qabta ay u soo bandhigto aqrintiisa 2-aad, waxa uuna soo xiray kulanka.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo u tagay Kismaayo xallinta khilaafka Jubbaland iyo DFS